လူသားတွေရဲ့ ရပ်တည်မှုကို ခြိမ်းခြောက်လာတဲ့ ကိုဗစ်နဲ့ တကမ္ဘာလုံး ကူးစက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ - Zet Star
လူသားတွေရဲ့ ရပ်တည်မှုကို ခြိမ်းခြောက်လာတဲ့ ကိုဗစ်နဲ့ တကမ္ဘာလုံး ကူးစက်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ
တကမ္ဘာလုံးမှာ.. ကိုဗစ် ကြောင့် သေဆုံးသူ တစ်သန်းကျော်သွားပါပြီ…ဒီနေ့ worldometers ရဲ့ အချက်အလက် တွေအရ လူပေါင်း ၃၃.၅ သန်းဟာ ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်..
တကမ္ဘာလုံး သေဆုံးနှုန်းကတော့ ၃.၈၈ % ဖြစ်ပါတယ်…ပထမလှိုင်း စစချင်းမှာ သေဆုံးနှုန်းဟာ ၃၀ % ကျော်ထိ ရှိခဲ့တာပါ….လူသုံးယောက်မှာ တယောက်သေနိုင်ချေကနေ လူတရာမှာ လေးယောက်ပဲ သေတော့အထိ လျော့ကျလာခဲ့တာပါ…
၁၉၁၈ စပိန်တုပ်ကွေး မှာ လူသန်းငါးဆယ်ကျော် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်…သေဆုံးနှုန်း ၂ % ဝန်းကျင်မှာ herd immunity ရခဲ့ပါတယ်…အဲ့ဒီအချိန်ရဲ့ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ သုံးပုံတပုံခန့် ကူးစက်ခံရပြီးမှ..herd immunity ရခဲ့တာပါ…ခု ၂၀၂၀ အချက်အလက် အရ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ဟာ သန်း ၇၈၀၀ ခန့်ရှိပါတယ်..၃၃.၅ သန်း ကူးစက်ခံရပြီးဖြစ်တဲ့ အတွက်..ကူးစက်ခံရသူ ဦးရေဟာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ စုစုပေါင်း ရဲ့ ၀.၀၀၄ % သို့မဟုတ် တနည်းအားဖြင့် ၁၀၀၀ မှာ လေးယောက်ခန့်သာ ကူးစက်ခံရသေးတာပါ…Herd immunity ရဖို့ဆိုရင်..ဆက်မတွေးရဲပါဘူး….
ကပ်ဘေးတခုဟာ အလွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်…တချို့ မျိူးစိတ်တွေဟာ မျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်ခဲ့ပါတယ်…ရွှေပြည်ကြီးရဲ့ အချက်အလက်တွေကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက ထုတ်ပြန်ပေးနေတဲ့ အတွက် တွက်မပြတော့ပါဘူး…
ကျွန်တော်တို့ဟာ အချိန်မရွေး ကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်…သေချာပေါက်လည်း တချိန်မဟုတ်တချိန် ကူးစက်ခံရမှာပါ…Mask ပဲတပ်တပ်..လက်ပဲဆေးဆေး..အိမ်ထဲပဲ ပုန်းနေနေ မလွတ်ပါဘူး….ဒါဆို social distancing တွေ..ကာကွယ်မှု တွေ ဘာကြောင့်လုပ်ခိုင်းနေတာပါလဲ…ကူးစက်နှုန်းကို တတ်နိုင်သမျှ လျော့ချဖို့ပါ….
ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးနေတဲ့ ကဏ္ဍတွေက supply နဲ့ demand အချိုးကို တတ်နိုင်သမျ လျော့ချဖို့ပါ….ကျန်းမာရေးစနစ် ပြိုလဲသွားရင် သေဆုံးနှုန်း တွေ ပိုများလာမှာဖြစ်ပါတယ်…ဒါပေမဲ့ social distancing တွေ..လော့ဒေါင်းတွေဟာ ကာကွယ်ဆေး သို့မဟုတ် ကုသဆေးတွေ မရေရာသေးတဲ့ အချိန်မှာ ယာယီကာကွယ်မှု တွေသာဖြစ်ပါတယ်…
ဆင့်ကဲ ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်စဥ်တွေအရတော့ ဘယ်တော့မှ မပြီးတဲ့ စစ်ပွဲတွေပါပဲ…နှစ်ပေါင်းသန်းနဲ့ချီပြီး..ဖြစ်လာခဲ့တာပါ..နောင်လည်း ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ…တကယ်ကတော့ မျိုးစိတ်တွေတိုင်းဟာ သူ့တို့မျိုးစိတ်ကို ကာကွယ်ဖို့..ရှင်သန်ကျန်ရစ်ဖို့ အတွက် ရုန်းကန်ကြရင်း ဒီတိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာကြတာပါ…နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မရှိပါဘူး…တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လိုက်..ငြိမ်းချမ်းရေး ယူလိုက်နဲ့ပဲ ကမ္ဘာဦးထဲက နေလာခဲ့ကြတာပါ…
ဒါပေမဲ့ ဒီဘက် ရာစုနှစ်တွေမှာ..လူသားတွေဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အသိဥာဏ် အရှိဆုံး မျိုးစိတ်ဆိုပြီး သွေးနထင် ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်…သိပ္ပံနည်းပညာတွေဟာလည်း မယုံနိုင်အောင် တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်…ဆေးပညာဘက်မှာလည်း..ပဋိဇီဝဆေးတွေ ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး တွေနဲ့ တခြားကုထုံးတွေဟာ တခြားရာစုနှစ်တွေနဲ့ ယှဥ်ရင် မာန်တက်စရာပါပဲ…
ဒါပေမယ့် သဘာဝတရားဟာ အသင့်တော်ဆုံးလူသာ ရှင်သန်ကျန်ရစ်မယ် ဆိုတဲ့ သဘာဝရွေးချယ်မှုကို တဘက်သတ် ခွင့်ပြုပေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး..အမြဲ ထိန်းညှိမှု လုပ်ပေးနေတာပါ..ဘက်မညီတဲ့ လက်ဝှေ့ပွဲတွေဟာ ကြည့်မှမကောင်းတာဗျာ…အရင် က ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု တွေမှာ…ကိုယ်ခံအား လျော့နည်းမှု ဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ခံအား ပြင်းထန်လာခြင်း တွေ ကို သက်သက်စီသာ တွေ့ရပေမဲ့ ကိုဗစ် မှာတော့ မျိုးစပ်ဗိုင်းရပ်စ် အသွင်ကို တွေ့ရပါတယ်…
လူလုပ်တာ ဟုတ်တာမဟုတ်တာက တပိုင်းပါ…ကိုဗစ် မှာ lymphopenia လိုမျိုး ကိုယ်ခံအားမူမမှန်တဲ့ ပုံစံတွေ တွေ့ရသလို့..Cytokine storm လိုမျိုး ကိုယ်ခံအား ပြင်းထန်တာ တွေကိုပါ တပြိုက်နက် တွေ့လာရပါတယ်…တိကျတဲ့ guidelines တွေ မထွက်နိုင်ကြတဲ့ အကြောင်းတခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်…ကျွန်တော်တို့ဟာ မျိုးစပ်ဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်တိုက်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံ အသစ်တစ်ခုပါပဲ……
Guidelines တွေဆွဲနိုင်ဖို့ မျိုးစပ်ဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ ဆေးဝါးတွေ အကြောင်း အချိန်ရရင် ရေးပါဦးမယ်…အားလုံးပဲ ကျန်းမာကြပါစေ…
← ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကို တိုက်ခိုက်ပြီး Q စင်တာမှ ထွက်ပြေးရန် ကြိုးစားသူအား ထောင်ဒဏ် တနှစ်ခြောက်လ ချမှတ်
ကိုဗစ်အမြန်စစ်ကိရိယာနဲ့ စစ်ခဲ့ရသူတဦး ပြောပြတဲ့ ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံ →